Vondrona Fraport: Mitombo hatrany ny fifamoivoizana amin'ny oktobra 2021
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Vondrona Fraport: Mitombo hatrany ny fifamoivoizana amin'ny oktobra 2021
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • People • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Raha oharina tamin'ny Oktobra 2019 talohan'ny areti-mifindra, ny ankamaroan'ny seranam-piaramanidina ao amin'ny portfolio iraisam-pirenena Fraport dia mbola nisoratra anarana ambany kokoa ny isan'ny mpandeha.
Ny seranam-piaramanidina Fraport's Group maneran-tany dia mitatitra ny fahombiazan'ny fifamoivoizana mpandeha an'habakabaka.
Ny seranam-piaramanidina Frankfurt dia mahatratra ny fitomboan'ny entana matanjaka.
Niakatra 100 isan-jato mahery isan-taona ny habetsahan'ny fifamoivoizana any amin'ny seranam-piaramanidina sasany, na dia nihena be aza ny haavon'ny fifamoivoizana tamin'ny Oktobra 2020.
Nahatratra ny isan'ny fifamoivoizana isam-bolana ambony indrindra hatramin'ny nisian'ny valan'aretina COVID-19, Seranam-piaramanidina Frankfurt (FRA) nandray mpandeha 3.4 tapitrisa teo ho eo tamin'ny Oktobra 2021. Nitombo 218.5 isan-jato izany isan-taona, na dia tamin'ny Oktobra 2020 tena malemy aza.
Ny fifamoivoizana mpandeha an'ny FRA dia niverina ho any amin'ny antsasaky ny haavon'ny pre-pandemic voalaza tamin'ny Oktobra 2019 (nidina 47.2 isan-jato). Nandritra ny vanim-potoana Janoary-Oktobra 2021, dia nisy mpandeha 19.2 tapitrisa teo ho eo nandeha tamin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt. Raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa dia nitombo 11.5 isan-jato izany raha oharina amin'ny taona 2020, ary nihena 68.3 isan-jato tamin'ny taona 2019.
Nitombo 10.0 isan-jato isan-taona ho 200,187 taonina ny taham-pitaterana entana, ahitana ny zotram-piaramanidina sy ny zotra an-habakabaka (miakatra 11.7 isan-jato raha oharina tamin’ny Oktobra 2019). Niakatra 75.4 isan-jato ny fihetsehan'ny fiaramanidina isan-taona ka 30,004 ny fiaingana sy fipetrahana tamin'ny Oktobra 2021. Nitombo 63.1 isan-jato isan-taona ho 1.9 tapitrisa taonina ny lanjan'ny fiaramanidina ambony indrindra (MTOWs).
Ny vondrona Fraport Ny seranam-piaramanidina maneran-tany koa dia nanohy ny fironan'ny mpandeha tsara tamin'ny Oktobra 2021. Nahatratra fitomboana lehibe ny ankamaroan'izy ireo. Niakatra 100 isan-jato mahery isan-taona ny habetsahan'ny fifamoivoizana any amin'ny seranam-piaramanidina sasany, na dia nihena be aza ny haavon'ny fifamoivoizana tamin'ny Oktobra 2020. ny Fraport Ny portfolio iraisam-pirenena dia mbola nisoratra anarana ambany kokoa ny isan'ny mpandeha. Na izany aza, ny seranam-piaramanidina sasany ao amin'ny Vondrona manompo toerana fizahan-tany be mpampiasa - toy ny seranam-piaramanidina grika na seranam-piaramanidina Antalya ao amin'ny Riviera Tiorka - dia nitombo ny fifamoivoizana ho 90 isan-jaton'ny haavon'ny krizy voarakitra tamin'ny Oktobra 2019. tamin'ny Oktobra 5.7 dia niova ho +2019%.
Ny Seranam-piaramanidina Ljubljana (LJU) any Slovenia dia nandray mpandeha 57,338 2021 tamin'ny Oktobra 908,553. Tany Brezila, tafakatra ho 1.2 14 ny fifamoivoizana tao amin'ny seranam-piaramanidina roa tao Fortaleza (FOR) sy Porto Alegre (POA). Seranam-piaramanidina Lima (LIM) any Peroa dia nanompo mpandeha 2.4 tapitrisa teo ho eo tamin'ny volana mitatitra. Ao amin'ny seranam-piaramanidina 111,922 grika, ny totalin'ny fifamoivoizana dia lasa mpandeha 2021 tapitrisa teo ho eo. Ny seranam-piaramanidina Twin Star ao Burgas (BOJ) sy Varna (VAR) ao amin'ny morontsirak'i Ranomasina Mainty Bolgaria dia nitatitra ihany koa ny fiakaran'ny fifamoivoizana, nitondra mpandeha XNUMX tamin'ny Oktobra XNUMX. Seranam-piaramanidina Antalya (AYT) tany Tiorkia dia nisy mpandeha 3.8 tapitrisa teo ho eo. Maherin'ny 1.8 tapitrisa ny mpandeha nampiasaina Seranam-piaramanidina Pulkovo (LED) tany Saint-Pétersbourg, raha nandray mpandeha manodidina ny 1.9 tapitrisa kosa ny seranam-piaramanidina Xi'an (XIY) ao Shina tamin'ny volana mitatitra.